Media in Myanmar, March 2022 – IJBS
The IJBS, the CMU-RCSD and the ANU-MRC successfully hosted this event in March 2022.
Myanmar Media Update 2022
March 29, 2022, 8:30AM-5:30PM, Thailand GMT +7
An in-person and online workshop hosted at the Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Chiang Mai University.
The 1 February military coup in Myanmar has thrown the country’s media and creative industries into tumult. Media organizations have been banned, journalists have been targeted for arrest, torture, and murder, and reporting and writing on the ground has become physically dangerous.
This special workshop hosted by the Independent Journal for Burmese Scholarship, the Regional Center for Social Science and Development, and the Australian National University’s Myanmar Research Center (ANU-MRC), will provideaforum to better understand what 2021 has meant for the country’s media—including but not exclusive to journalism. What is the current state of the media and the creative industries in Myanmar today, and what is at stake for the future?
In addition to papers by media scholars, artists, writers and experts, the workshop will feature three updates from mediascape practitioners, with local, exile and international perspectives.
We welcome panel and paper ideas, in English, in Burmese and in any of the other languages spoken in Myanmar, regarding any topic related to the media and creative industries in Myanmar. We are hoping for presentations covering journalism, film, radio, social media, and more, and for chosen papers to be supported for publication inaspecial issue of the journal to be printed in late 2022. Presenters might focus on one or more themes from the following:
Organizations: How have Myanmar media organizations changed asaresult of their physical dispersal, decentralization and increased reliance on the internet in the wake of the coup, and how are Myanmar media organizations, including ethnic, exile and underground groups handling operational challenges in the complex context of the coup?
Information: What are the challenges faced by citizen journalists and professional reporters and what effect is post-coup military state propaganda having on the country? What characterizes the state of information gathering, verification and dissemination?
People: What role is social media playing in revolutionary Myanmar? How is new technology and social media being weaponized by revolutionaries and military actors? In what creative ways are people accessing, sharing and interacting with the media?
Click here to fill out the expression of interest form, for both audience attendees and presenters. If you wish to present (in English), you are required to submita100-word abstract. If you wish to attend in person, note that no support will be given for travel to Chiang Mai. Please email ijbsmediaconference@protonmail.com with any further questions.
Myanmar Media Update
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်၊မာ့မီဒီယာအခြေအနေ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
အွန်လိုင်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် ပုံစံ ၂မျိုးဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၉ ရက်၊မတ်လ၊၂၀၂၂ခုနှစ် နံနက် ၈နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ မွန်းလွဲ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ် အထိ (ထိုင်းစံတော်ချိန်)
The Regional Center for Social Science and Development, ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်, ထိုင်းနိုင်ငံ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်မှ မတရားအာဏာသိမ်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနယ်ပယ်အား ကသောင်းကနင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားမှာ ပိတ်သိမ်းခံရပြီး သတင်းထောက်အများစုမှာ ပစ်မှတ်ထား၍ ဖမ်းဆီး၊နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရကာ မြေပြင်မှ သတင်းပေးပို့ခြင်းမှာလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အန္တရာယ်ရှိလာခဲ့သည်။ သိစပ်မြင်နှံ့ လွတ်လပ်သော မြန်မာ့သုတေသနဂျာနယ်၊ The Regional Center for Social Science and Development)၊ နှင့် ဩစတေးလျ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ရှိမြန်မာ့ရေးရာသုတေသနဌာနတို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သည် ၂၀၂၁ခုနှစ် အတွင်း ဂျာနယ်လစ်ဇင် သီးသန့်အတွက်သာမက မြန်မာ့မီဒီယာလောက မည်ကဲ့သို့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့ ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနယ်ပယ်၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အဘယ်အခြေအနေရှိကြောင်း၊ အနာဂါတ်တွင် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိင်ကြောင်း ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်သော ဖိုရမ်တစ်ရပ် အနေဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်း မီဒီယာပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ စာတမ်းများကိုဖတ်ကြားသွားမည့်အပြင် မြန်မာ့ မီဒီယာလောကအတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မီဒီယာသမားများမှ ပြည်တွင်း၊ အဝေးရောက် နှင့်နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများတို့၏ ရပ်တည်ချက်သဘောထားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Presentation ၃ ခုအားတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနယ်ပယ် နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့် အကြောင်းအရာမျိုးအတွက်မဆို စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းများနှင့် ပတ်သတ်သည့် အကြံဉာဏ်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသည့် အခြားမည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆိုဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဂျာနယ်လစ်ဇင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ရေဒီယို၊ ဆိုရှယ် မီဒီယာ အပါအဝင် အလားတူအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သတ်သည့် Presentation များအား လက်ခံလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ အချို့အား သိမြင်နှံ့စပ်ဂျာနယ်၏ မီဒီယာဆိုင်ရာ Special Issue ပြန်လည် မွမ်းမံ ပြင်ဆင်၊ ရေးသား တည်းဖြတ်ပြီးထုတ်ဝေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လျောက်ထားပေးပို့သူများသည် အောက်ပါ အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်မျိုး (သို့) တစ်မျိုးထက်ပို၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ – အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ကျက်နေထိုင်ရမှု၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျော့ချမှုနှင့် အင်တာနက်မှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအား ပိုမိုအားကိုးလာရမှုတို့ကြောင့် မြန်မာမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲလာရပုံ၊ ရှုပ်ထွေးသည့်အခြေအနေအသစ်တွင် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဝေးရောက် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မြေအောက်လှုပ်ရှားနေရသည့် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများစသည့် မြန်မာ့ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများမှ များပြားလှသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရပုံ
သတင်းအချက်အလက် – အရပ်သားသတင်းထောက် (citizen journalists)များနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သတင်းထောက်များရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာများမှ နိုင်ငံအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံ၊ စစ်အာဏာသိမ်းအလွန်ကာလတွင် သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ အမှားအမှန်စီစစ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း အခြေအနေ
လူထု– တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းကဏ္ဌ၊ တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားများမှ နည်းပညာအသစ်များနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာအား အသုံးချနေကြပုံ၊ လူထုမှ ဆန်းသစ်သည့်ပုံစံများဖြင့် မီဒီယာအား အသုံးပြု၊ မျှဝေ၊ ဆက်သွယ်နေကြပုံ
အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လိုသူများနှင့် တင်ဆက်လိုသူများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် အတွက် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်) တင်ဆက်လိုပါက စကားလုံးအရေအတွက် ၁၀၀ ရှိ စာတမ်းအကျဉ်းကို တင်သွင်းရမည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်တက်ရောက်လိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကြိုတင်ရောက်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ရမည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်မည့်သူများနှင့် တင်ဆက်မည့်သူများအား ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် ခရီးစရိတ်အား ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များရှိပါက ijbsmediaconference@protonmail.com သို့ Email ပေးပို့ကာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။